संस्मरण अनुभूति : ‘मायालु मञ्जु’
वि.सं २०७८ असोज ३ आइतबार फोरेक्स युनिकोड मौसम
१६ साउन , २०७८
श्री सिद्धार्थ उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट अंग्रजी विषय लिई प्रविणता प्रमाणपत्र तह राम्रै अङ्कमा उत्तिर्ण गरिसकेपछि उच्च शिक्षाको लागि काफलनेटीबाट काठमाडौं छिरियो । काठमाडौं छिर्नुको उद्येश्य पढाइ र काम सगँसगैँ लैजानु थियो ।
सोहिअनुसार सहरीया बसाईँ सुरु भयो । जागिर र पढाईको यात्रा अंग्रजी विषयमै स्नातकोत्तर नसकुन्जेल चलिरह्यो । त्यसपछी अध्ययनले जागिरलाई उछिन्न सकेन । सरकारी क्याम्पसको अध्ययन सगँसगँै काठमाण्डौँका सामान्य आवासीय विद्यालयदेखि अन्र्तराष्ट्रिय स्तरका विद्यालयसम्ममा शिक्षकदेखि प्रशासनिक पदमा रहि काम गरियो । पढाई र जागिर सगँसगैँ चलिरहेको हुनाले लामो समयसम्म धित मरुन्जेल घरमा बस्ने मौका कहिल्यै मिलेन । त्यस्तै सात दश दिनको विदा मिलायो, हतार हतार आयो, बस्ने मन हुँदा हुँदै साइत जुरोस नजुरोस पढाइ र जागीर भेटाउन कुँदिहाल्यो । घरकाले पनि अल्लि दिन बसे हुन्थ्यो भन्ने सोच्ने र आप्mनो पनि अल्लि दिन बस्न पाए त हुन्थ्यो भन्ने भैरह्यो । हरेक पटक घर छोड्दा मनमा आइरहन्थ्यो घरमा आनन्दले बसेर फर्किने दिन कहिल्यै आउला की ?
विहान आठ बजे देखि बेलुका पाँच बजे सम्मको जागिरले वाक्क दिक्क भएको थिएँ । समय बिहान आठ बजेदेखि पाँच बजेसम्म भनेपनि अतिरिक्त समय जैले लाग्थ्यो । जागिरको कामले अरु केहि पनि सोच्न नपाइने । “हामि जैले शिक्षक भैरहने? हुन त शिक्षक पेसा नराम्रो हैन तर यही पेशालाई निरन्तरता दिने हो भने जाद्रै भइएला प्रिन्सिपल । के हाम्रो करियर त्यहाँ सम्म मात्रै हो त ? कित स्कुल नै खोलेर चलाउन प¥यो नत्र यो जागिरले हामीले अरुलाई मात्र धनि बनाइरहेका छांै हामि चाहिँ जहाँको तेहिँ भन्ने प्रश्न जैले मेरो घनिष्ट मित्र पुकार धिताल र मेरो चिया गफमा भइरह्यो । एउटा शैक्षिक सस्ंथा (इन्स्टिच्युट) खोलेको एक बर्ष भैसकेको थियो । संस्था राम्रो चल्दै गैरहेको थियो । अब यसैलाइ स्तरोन्नती गराएर व्यापक बनाउन प¥यो भन्ने सोचेँ । जसले मलाई जागिर छोड्न बल पु¥यायो । छोडेँ ।
चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोभिड १९ विस्वभर पैmलियो । जसको प्रभाव नेपालमा पनि प¥यो । फलस्वरुप लकडाउन सुरु भयो । शैक्षिक क्षेत्रमा प्रभाव नपर्ने कुरै भएन । पूर्वनिर्धारित सबै कामलाई थाती राखेर लकडाउन सुरु नहुँदै २०७७ सालको चैत्र ९ गते घर आइपुगियो । जागिर नभकोले घर आउन सजिलो भयो नत्र घरमा आउन पाइने थिएन । न त जागिरको टेन्सन न त पढाइको टेन्सन । घर छोडेको एक दशकपछि स्वतन्त्र रुपमा घर बस्ने अवसर मिल्यो । इन्डिया र नेपालमा भएका अति व्यस्त काम भएका बाहेक धेरैजसो दाजुभाई अनि साथीभाई सबै गाउँभा भित्रिए । एकातिर गाउँमा दशैँ आएजस्तो थियो भने अर्कोतिर गाउँमा आउनेले कोभिड भित्र्याए कि भन्ने डर । गाउँमा बाहिरबाट आएका हामी सबैलाई अब त बाचिन्छ भन्ने ढुक्क थियो ।
गाउँको काखमा भएपछी यस्तो आभास गराउँछ त्यसैले गाउँ सर्वप्रिय छ । चैतको पन्ध्र काटिसकेको थियो । लालिगुराँस फुलेर निख्रिनै लागेको थियो । ऐँसेलु र काफल पाक्ने समय सुरु हुँदै थियो । त्यसमाथि बसन्त ऋतुको पुर्नजन्म । जौँ गौँ पाक्न लागेको थियो । कमेरे तल थेप्चेढु«ङ्गा, बाघलोटेतिर सल्लीपीर झरेको थियो । सल्लाघारी सुसाइरहन्थ्यो । काकाकुल, कोइली लगायत चराहरुले थप संगीत गुन्जाउँथे । पुरै भिर पाखाहरु गुन्जायमान हुन्थे । हाम्रा वन र ख¥यानको माटो, घाँस, बोटबिरुवा, चराचुरुङ्गी सबैलाई साथी बनाउँदा बनाउँदै करिब पन्ध्र दिनको होम क्वारेन्टीन आनन्दले बितेको पत्तै भएन ।
विस्तारै गाउँको परिस्थिति सामान्य हुँदै गयो । गाउँमा कसैको अप्रिय खवर सुन्न परेन । मल फाल्नुपर्ने, गौँ, जौँ काट्नुपर्ने, झाट्नुपर्ने, बाँझो मार्ने, मकै छर्ने, सम्पूर्ण कामहरु सकिए । यी कामहरु गर्दा करिब एक महिनामा मैले काठमाण्डौ र मेरो डिग्रिलाई बिर्सिसकेको थिएँ । कहिलेकाहीँ काठमाण्डौतिरका साथीभाइहरुसँग कुराकानी हुँदा लकडाउनका, जागिरका र कोठाभित्रको बसाइका समस्याहरु सुन्दा जागिर छोडेर घर आएर ठिक गरेछु जस्तो लाग्यो । मेरो दाजु इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो ।
इन्डियाका महामारीका डरलाग्दा खवरहरु रेडियो टिभिबाट सुनिन्थे । हरेक खबरमा मेरी आमाले मेरो दाइलाई सम्झिन्थिन् । सन्तानको माया । यदी म पनि घरमा नभइदिएको भए मेरी आमाका हरेक दिनरातहरु साँच्चै नै त्रासमा बित्थे । मेरो जागिर र काठमाण्डौको बसाईलाई मेरो बुबाआमा र गाउँको काखले जित्यो । मैले यसैलाई ठुलो कुरा माने, खुसी भएँ ।
काफलनेटीमै जन्मेहुर्केको पछि बसाइँसराइँ गरेर सन्धिखर्क गएको राजेन्द्र भाइसगँ मेरो धेरै सम्पर्क भइरहन्थ्यो । उ कृषिमा आबद्ध थियो र धेरै रुचि पनि । उ सबै कुरा छोडेर कृषिमा राम्रो भविष्य देखेको मान्छे । च्याउ खेति गरिरहेको थियो ।
लकडाउनले उसलाई पनि घरमै बसालेको थियो । उसलाई काफलनेटीमा आप्mनो जग्गा नभएपनि कतै मिलाएर कृषि कर्म गरेर देखाउन मन भएको कुरा मलाई पटक पटक भनेको थियो ।
मैले पनि यो कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिइरहेको थिएँ र सोचिरहेको थिएँ गाउँमा के गर्न सकिन्छ होला भनेर । गाउँमा केहि गर्नको लागि लकडाउन नै उत्तम समय हो भन्ठानेर मैले उसलाई गाउँमै बोलाएँ ।
जेठ महिना चल्दै थियो । घरमा काम गर्ने मान्छे कोही नभको र बुबा आमाले नसक्ने भएपछी आधा भन्दा धेरै बारीहरु बाँझिएका थिए । ओद्देमा दिइयका बारीहरु स्यार सुसार नपायर रुख्खिदै गएका थिए । ढिक काल्नाहरुलाई बनमाराले खाइसकेको थियो । बुबाआमाले पनि सम्पत्तीले स्यार नपाएको कारणले फेरी ओद्देमा नदिने बिचार गर्नुभयो । सकुन्जेल गरेर खाएका बारिहरु बाँझिदै जाँदा बुबाआमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो । राजेन्द्र र मैले बुबा आमा सगँ सल्लाह गरेर तिनै बाँझा बारीलाई सदुपयोग गर्ने बिचार ग¥यौँ । हेर अब बाँझिएका बारीहरुले स्यार पाउने भय भनेर बुबा आमा पनि खुसी हुनुभयो ।
हाम्रो ठाउँ समुन्द्री सतह बाट करिब अठार सयको उचाइमा छ । यो ठाउँमा के लगाउँदा उपउक्त होला भनेर छलफल ग¥यौँ । बुबाआमा लगायत गाउँका अरु दाजुभाइहरुसगँ पनि सल्लाह लियौँ । यो ठाउँमा कि जात पनि हुन्न दुख मात्रै हुन्छ भन्ने मान्छेहरु पनि भेटिए । मान्छेहरुले यस्तो भन्नुमा अहिले सम्म कसैले केहि गरेर नदेखाको भएर हो भन्ने हामीलाई लाग्यो । हुनपनि हो अहिले सम्म तेस्तो उत्पादनमूलक कसैले पनि केहि गरेको पाइएको छैन । सुदिप दाइले पहिले देखि नै कृषिमा रुचि राख्दै आउनुभएको र धेरै कुराहरु अहिले पनि परिक्षण नै गरिरहनुभएको छ । उपल्लाघर जिवन दाईले पनि बाख्रा पालन गरिरहनुभएको छ तर तेती सन्तुष्ट भएजस्तो देखिँदैन । उहाँहरुले कागती, अम्रिसो, अलैँची र टिमुर खेतिमा राम्रो भविष्य भएको देख्नुहुन्छ । तर अहिले सम्म कुनै पनि खेतिबाट मनग्य आम्दानी भएको भने देखिएको छैन किनभने सबै जसो परिक्षणकै क्रममा जस्तै छन् ।
यहाँको भौगोलिक बनावट र माटो अनुसार केही अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल र सरसल्लाहबाट ब्यापक रुपमा ठाउँअनुसार टिमुर, अलैँची र तेजपत्ता (सुनकाउली) लगाउने निर्णय ग¥यौँ । सुरुमा हामि आपैmले जाँगर निकाल्यौँ । बनमारा उखेल्ने, काडाँ फाँड्ने, काँडा काट्ने, ठाउँ छनोट गर्ने, खाल्ठा खन्ने, बिरुवा खोज्ने लगायतका काम सुरु ग¥यौँ । करिब पन्ध्र सय अलैँची, तीन सय तेजपत्ता र दुइ सय टिमुर लगायर बाँझो रहेको जमिन सबै सदुपयोग ग¥यौँ । चार पाँच बर्षपछि बार्षिक करिब चार देखि छ लाख सम्म आम्दानी दिने अनुमान गरेका छौँ । यसरी ब्यापक रुपमा काफलनेटीमा कृषि गर्न लागेको हामि पहिलो पटक हो । प्रतिफल कस्तो आउँछ त्यो समयले बताउला ।
मैले गाउँघरका भाईबहिनिहरुलाई जम्मा गरेर ट्युसन पढाउँथे । ट्युसनको अलावा गाउँमा केहि फरक स्वाद चखाइदिन प¥यो भनेर ट्युसन सगँै एउटा बाल नाटकको पनि तयारी गराएँ । भाइबहिनिहरुको उत्साहपूर्ण सहभागिता रह्यो । करिव पन्ध्र दिनको प्रशिक्षणपस्चात नाटक तयार भयो । भाईबहिनिहरुको लागि त्यो पन्ध्र दिन अत्यन्तै खुसीका दिन रहे । धेरै सीपहरुको विकास गरे । नाटक काफलनेटीको मुटु भूमेकाथान (पारिचौर) मञ्चन गर्ने सल्लाह ग¥यौँ । मञ्चनको अघिल्लो दिन सबैजनाले सल्ले काफलनेटीका सम्पूर्ण परिवारहरुलाई चकलेट दिएर घरघरमा गई निमन्त्रणा गरे । नाटक मञ्चन गाउँको लागि नौलो थियो । अर्काे दिन गाउँलेहरुको उल्लेख्य सहभागिता रह्यो । भाइबहिनीहरुले पनि निर्धक्कका साथ मञ्चन गरे । नाटक “मायालु मञ्जु” सामाजिक परिवेशमा आधारित सन्देशमुलक थियो । गाउँलेहरु तथा भाईबहिनिका आमाबुबाहरु आप्mना छोराछोरीको प्रस्तुती देखेर दंग परे । आप्mना छोराछोरीको प्रतिभा थाहा पाए । यसमा साथी गणेश पौडेलको उल्लेख्य सहयोग छ ।
नाटक हेर्न गाउँका सब युवायुवतीहरुको पनि उपस्थिती थियो । तिनिहरु पनि भाईबहिनिहरुको नाटकबाट खुसी थिए । नाटक सकिएपछी दुई चार जना मिलेर गफगाफ गर्दागर्दै सबैलाई समय कटाउन गाह्रो भएको कुरा आयो । तेतिखेर गाउँमा एकदुइभारी घाँस काट्न बाहेक अरु खासै काम थिएन । हामी फुर्सदिला थियौँ । लकडाउन खुल्ने कुनै संकेत थिएन । हामी युवा युवती मिलेर गाउँको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न लाग्यौँ । अन्त्यमा भाइबहिनीहरुले यती राम्रो नाटक गरे भने हामी पनि यस्तै नाटक गरौँ न त भन्ने कुरो आयो । यो कुरामा हामी सबै जना सहमत भयौँ । साथी गणेश हामि सगँै थिए । उनि नाटक कलाकार नै थिए । उनले पनि सहयोग गर्ने भनेपछि हामि झन खुसी भयौँ । हामीहरु करिब अठार विस जनाको समूह हुने भयो । हामी सबै उत्साहित देखिन्थ्यौँ । शुशील, शुनील, प्रेम म लगाएत मिलेर तेसै राति गाउँकै समसामयीक परिवेश तथा समस्यामा आधारित स्कृप्ट तयार पा¥यौँ । करिब बीस पच्चिस दिनको तयारी पश्चात नाटक तयार भयो । जैले मुलावारी आउने जाने गरेको देखिरहनेहुनाले गाउँलेहरुले कहिले देखाउलान् कस्तो देखाउलान् भनेर दिन कुरेर बसिरहेका थिए । लकडाउनले मानिसहरु जम्मा गराउनलाई अप्mठ्यारो बनाएको थियो तर गाउँ सुरक्षित नै भएकोले गाउँका मात्र मानिसहरुलाई जम्मा गरेर सामाजिक दुरी कायम गरायर नाटक मञ्चन गरायौँ । गाउँलेहरुले पञ्चायत कालपछी नाटक बल्ल देखेको प्रतिक्रिया दिए । अत्यन्तै रमाय । अझ ठुलाबाँज भुनिराम माइलाबाले त हाम्लाई यस्ता नाटक महिनामा एउटो देखाओ भन्दैहुनुहुन्थ्योे । हामि सहभागीहरु सबै कलाकार भयौँ । नाटकले हामि सबैमा आत्मविकास तथा गाउँका सबै युवा युवतीहरुलाई एकिकृत गराउन सहयोग ग¥यो । नाटक “झिल्को” को निर्देशन साथी गणेश पौडेलले नै गरे ।
जैले मुलाबारी चौरमा नाटक भन्दै समय बिताएको, रमाएको बानी नाटक सकिएपछी त हामि सबैलाई के गरम र कसो गरम भयो । बिहानमा एक भारी घाँस काटेपछी त काम केहि पनि भएन । बानी बिग्रेछ भन्या । नाटकको प्रतिक्रियाबाट उत्साहित भएका हामि फेरी पनि अरु केहि गरम भनेर सल्लाह ग¥यौँ र सबैको सल्लाह अनुसार एउटा लोक दोहोरी तयार पार्ने निर्णय ग¥यौँ । स्थान मुलाबारी नै तय ग¥यौँ । समय पनि दिउसो तिन बजेदेखि बेलुका छ बजेसम्म तोक्यौँ । दोहोरीको सन्दर्भ लकडाउन नै राख्यौँ । केटातर्फको नेतृत्व शुशिल र केटीतर्फको नेतृत्व हेमन्ताले गर्ने कुरो भयो । बर्षाको समय भएकोले कहिलेकाहीँ पानीले समस्या नै पाथ्र्यो । सबै कुराको बाबजुत दोहोरी पनि तयार पा¥यौँ । गाउँलेहरु दोहोरी कहिले देखाउलान् भनेर पर्खिरहेका थिए । दोहोरीको दिन पनि आयो । यो पाली पनि मानिसहरुको उल्लेख्य सहभागीता रह्यो । सबैजना खुसी भए, रमाए । नाटक हामिले निःशुल्क प्रस्तुत गरेका थियौँ तर कसै कसैले यती राम्रो नाटकको लागि मागेका भा दुइ चार रुप्पे दिने थियौँ भन्ने सुनेको भएर यसपाली चाहिँ दिन इच्छुक सबैलाई अनुरोध ग¥यौँ । धेरैले सहयोग गर्नुभयो । सहयोग राम्रै उठ्यो र अर्को दिन तल्लापोख्राको डाँडोमा वनभोज गयौँ, औधी रमाइलो ग¥यौँ ।
मेलापर्वका दिनहरु सुरु भए । लकडाउन खुकुलो हुँदै गयो । लकडाउनले थला पारेको मानिसको आर्थिक स्थितिले कमाउन जान बाध्य बनायो । विस्तारै मानिसहरु कामको खोजी गर्दै कोही शहर, कोही इन्डिया, कोहि विदेशतिर जान थाले । म पनि मंसिरको पहिलो साता गाउँका नौ दश महिनाका यादहरु बोकेर काठमाण्डौँतिर लागँे ।
करिब चार पाँच महिनाको काठमाण्डौको बसाइपछी कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भयो । फेरी लकडाउन हुने सुचना आयो । करियरको चिन्ताले भन्दा पनि मलाई गाउँ जान पाउने खुशीले जित्यो । मानिसहरुले डिग्री गरेको मान्छे यसरी खाली बसेको देख्दा नराम्रो सोच्दा हुन् । सरकारी जागीर खाने सोच कहिल्यै आयन । नौ दश बर्ष काम गरेको अनुभवले आप्mनो क्षेत्रमा अब्बल बनाएको छ । आप्mनै क्षेत्रमा उद्यमशिलताको बाटोमा छु । ढिलो चाडाँे अवस्य राम्रो गरिन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण विस्वस्त छु । जागीर नै नभएपनि आयस्रोतका बाटाहरु छदैँ छन् । यो महामारीको बेलामा आयस्रोत नै नभएपनि घरपरिवार सगँ सगँै बसेर यो महामारीबाट सुरक्षित हुन सकिन्छ भने त्यो भन्दा ठुलो कमाई यो बेलाको अरु हुन सक्दैन ।
पोहोर सालको कोभिडको पहिलो लहर भन्दा यो सालको दोस्रो लहर झन् डरलाग्दो भएर फैलियो । पोहोरसाल भन्दा मानिसमा बढी त्रास फैलिरहेको छ र दिनानुदिन मृत्युका खवरले मानिसलाई अझ बढी सजग बनाएको छ । पोहोर साल त बोटविरुवा रोपेर, नाटक गरेर, दोहोरी गरेर लकडाउनको सदुपयोग गरियो भने अहिले के गर्ने त ? पोहोरसाल लगायका बोटविरुवामा गोडमेल र मलजलको काम त छदैँ छ त्यो भन्दा बाहेक अरु के गर्ने त भनेर सोचेँ । हाम्रो मालारानी गाउँपालीकाले पचास प्रतिशत छुटमा टनेल वितरण गरेको खबर थाहा पायँ । हाम्रो पोहोर सालको नाटकको सन्देश पनि हरेक घरमा टनेल राखेर बेमौसमी खेती गर्न प्रोत्साहन गर्नु थियो । जिवन दाईले र सुदिप दाईले गोलभेँडा फलाएको देखेँ तर धेरै मेहेनतले । मैले पनि गरे कसो नहोला भनेर वडाबाट एउटा टनेलको सिफारीस लिएर पालिकामा बाशुदेव र म गएर टनेल ल्याएँ । विउ आपैm लिएर बेर्ना तयार पारेँ । बुवा, माथि माइलदाई, म, नविन, माइकल, मिलन मिलेर मनसुन सुरु नहुदैँ टनेल तयार पा¥यौँ । सबैले अलिकति अग्लो भयो भन्दै थिए तर गोलभेँडाको लागि दुई मिटर उचाइ ठिकै थियो ।
बिरुवाहरु अल्ली बाक्लै लगाएको थिएँ । आवस्यक परामर्श ठुलाबाँज कृष्ण र खन नविन सगँबाट लिइरहेको थिएँ । दिनको दुइ पटक जाने हेर्ने गर्थे । हुर्केको देख्दा साह्रै खुसी लाग्थ्यो । फोटो खिच्थेँ । साथीभाईहरुलाई पठाइदिन्थे । एउटा राम्रो विरुवा त झन् मैले फेसबुकको स्टोरीमा समेत राखेको थिएँ । भिडियो कल गरेर कृष्णलाई देखाउँदा साहै्र खुसी भयो । बेर्ना राम्रो सगँ हुर्केका देख्यो । काला पात गरेर सबै एकैनासले हुर्केको देख्दा जो पनि लोभिन्थ्यो । कृष्णले झिक्रा कसरी राख्ने भन्ने बारे मलाई बताइदियो । उसले गोलभेँडा राम्रैसगँ फलाउने सम्भावना देखेको थियो । उसले भन्थ्यो, “गर्न पर्ने सबै कुरा म तलाई यहीँबाट बताइदिन्छु, तैँले गाउँमा नमुना गोलभेँडा फलाएर देखा, कसै कसैलाई देखायकै हो जसरी गर ।” म पनि उत्साहित भएको थिए । हुन्छ भन्ने कुरामा म पनि आशावादी थिएँ । यती कुराकानी भैसकेपछी हामिले फोन राख्यौँ ।
बेलुका खाना खाएर बैठकमा सुत्न निस्कियँ । मौसम पुर्वानुमान महाशाखाले मनसुन भारतको केरला बाट हिँडेको छ जुन तेह्र तारिख सम्ममा नेपाल भित्रिने समाचार दिएको थियो । नभन्दै एक्कासी हावा हुरी सहित मनसुन सुरु भयो । त्यो हावाको वेग सुसाएको सुन्दा मेरो मुटु नै ताकेजस्तो भयो । त्यो हावा टनेलमा ठोक्किदा निस्केको आवाजले मलाई मिनि र्हाट अट्याक आएजस्तो हुन्थ्यो । म ति विरुवाहरुलाई छोराछोरी सरह सम्झिन्थे, माया गर्थे । ति साना साना विरुवाहरुलाई हावाले पेल्दाको पिडा म महसुस गर्न सक्थे । जोगाउने उपाय म सगँ केहि पनि थिएन । जे पर्ला उही टर्ला भन्ने सोचेर निदाउने प्रयास गरे तर धेरैवेर निदाउन सकिन ।
अर्काेदिन विहान पनि उत्तिकै हावा र पानि परिरहेको आवाज म बैठक कोठाबाट सुन्न सक्थे । टनेलको आवाज पनि आइरहेको थियो । मनमनै सत्तुरले सबै खाइदियो भन्ने सोचे । माइकल उठेर पिसाब फेरेर फर्किदा अंकल टनेल ता उडाइदिएछ भन्यो । मलाई नरमाइलो लाग्यो । हेर्न पनि मन लागेन । ढिला उठ्छु भनेको बेजोडले चलेको हावाहुरीसगँैको टनेलको आवाजले सुत्नै दिएन । ढोका खोल्दा वित्तिकै आँखा सिधै तेहि टनेलमाथिी गए । हावाले डाँडाभाटाबाट टनेललाई चुँडाल्न हर प्रयास गरिरहेको थियो । गाडेका किलाहरु सबै लालाबालाका टाउकामाथी बजारीएका थिए । त्यो देख्दा मलाई दुखिरहेको थियो । एउटा तस्विर कैद गरे अनि सबै आसाहरु मारेँ ।
बुवाआमाले भन्नुभयो, “रहर गरेओथिस् द्यायन सत्तुरले”, मैले भने, “अब के गर्नेतो, अब ज्याला तिरेर बलियो बनाउन लगाउन प¥यो ।” “ह टेन्सन नगर, कस्ता कस्ता दुख झेलेर ता मान्छे बाँचेओछ यो जाँटो केइ हैन । अब मैले हेर्दै जा दुनियाले फोटो खिच्ने टनेल बनाउँछु ।” बाउको यो हिम्मत सुनेर म पनि केहि शित्तल भएँ । हासेँ ।
लकडाउन उत्पादनमूलक होस् भन्ने मेरो मान्यता हो । पहिलो पटक गर्ने सम्पूर्ण कामहरु प्रयास मात्र हुन् जसमा पूर्णता प्रायमा भेटिँदैन । अंग्रेजीमा एउटा भनाई छ । “एक्स्पेरियन्स इज द बेस्ट टिचर” अनुभवले नै धेरै सिकाउने हो, काममा पूर्णता ल्याउने हो । तर काम नै गर्न छाड्नु चाहिँ गलत हो । शिव खेडाको ‘जित तपाईको’ भन्ने पुस्तककमा पनि ‘सफलतामा उनान्सय प्रतिशत असफलता लुकेको हुन्छ’ भनेको छ ।
समग्रमा पोहोर सालको लकडाउन उपलब्धिमूलक नै रह्यो । पोहोर सालको लकडाउनमा टिमुर, अलैँची र तेजपत्ता लगाइयो जुन दिर्घकालिन रुपमा सोच्ने हो भने अवकासपश्चात आउने पेन्सन जस्तै हो । नाटक र दोहोरी दुवै सामाजिक रुपान्तरण गर्ने माध्यम हुन् । यी दुबैको माध्यमबाट हामिले सामाजिक समस्या र तिनको समाधान गर्ने उपायहरु छर्लङ्ग देखाइदियौँ । यो सालको लकडाउन पनि उपलब्धिमूलक नै हुनेछ । केहि नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्नुपर्छ सके सफल भइन्छ नत्र पाठ सिकिन्छ । भनिन्छ नि ‘सिकाइ जिवनपर्यन्त प्रक्रिया हो ।’
शनिवार १६, साउन २०७८ ९:३३:२८ मा प्रकाशित
पहिलेको भन्दा अहिलेको संविधान प्रगतिशिल छ : मुख्यमन्त्री शाही
‘संविधान पुनरावलोकन गर्ने समय आयो’-विज्ञहरु
कांग्रेस महाधिवेशनः यसरी हुँदैछ तीन युवा नेताहरुको महामन्त्रीमा भिडन्त
'गर्भमा नै हराउँछन् छोरीहरू'
एक हप्ताभित्र सरकारमा सहभागी हुन्छौंः माधव नेपाल
गठवन्धन सरकारका कारण संविधान संकटमा पर्‍यो- अध्यक्ष बराल
फुयालको आदेश: बार र बेन्च दुवैले 'र्‍याखर्‍याख्ती' पारेपछि प्रधानन्यायाधीशले भने- 'निकास दिन्छु'
ओलीको आश्वासन: कार्यवाहक अध्यक्ष, दोश्रो वरीयता-व्यवहार: खोसियो इन्चार्ज, पुरानै उपाध्यक्ष,नवौं वरीयता
अखिल क्रान्तिकारीको नयाँ नेतृत्वमा दावी गर्ने को हुन् ?
सर्वोच्च अदालतको आदेश: एमालेले थप चार सांसद गुमायो
उपाध्यक्ष सिंहले भनिन्– जनप्रिय बजेटले एमालेलाई ऐंठन गरायो, संसदमा कुस्ती खेल्यो !
३ कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
विप्लवलाई सुरेन्द्र भण्डारीले दिए पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर उपहार
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले भन्यो– ‘ओलीले गठन गरेको भूमि आयोग असंवैधानिक भएकाले विघटन’
एमाले निकट कर्मचारी संगठन फुट्यो
अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलन सर्‍यो !